စပါးအသင်းမှာကော မော်ရင်ညို ဘယ်သူတွေကို ဝေဖန်ဦးမလဲ | FOX Sports Myanmar
ပရီးမီးယားလိဂ် (PL) | ဒီဇငျဘာ 4, 2019
စပါးအသင်းမှာကော မော်ရင်ညို ဘယ်သူတွေကို ဝေဖန်ဦးမလဲ
‘A tough couple of days for Lingard and Fred’ – Solskjaer after Manchester derby racism storm
မော်ရင်ညိုဆိုတာက မော်ဒန်ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကျော် နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် သူရဲ့ပြောဆိုတဲ့ စကားတွေ နဲ့ အပြုအမူတွေက မကြာခဏဆိုသလို ဝေဖန်ခံနေရတဲ့နည်းပြတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချဲလ်ဆီး ၊ ရီးရဲလ် ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတွေမှာ အသင်းတွေရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို မော်ရင်ညို အချင်းများခဲ့ပြီး ဒီကစားသမားတွေကို လူသိရှင်ကြားကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်း ကနေထွက်ခွခဲ့ပြီး စပါးအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှာလည်း ဘယ်သူတွေဘယ်လိုဝေဖန်ခံရဦးမလဲဆိုတာ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ဒါဘီကောင်တီအသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပင်နယ်တီကန်သွင်းခဲ့တဲ့ နောက်ခံကစားသမား ဖီးလ်ဂျုံးစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မော်ရင်ညို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။ပုံမှန်ပွဲချိန်အတွင်းမှာ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်နေခဲ့လို့ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ကန်သွင်းရာမှာ တစ်ဖက်ကို (၈) ကြိမ်ထိ ကန်သွင်းခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ဖီးလ်ဂျုံးစ်ရဲ့ ပင်နယ်တီ လွဲချော်ခဲ့လို့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဖီးလ်ဂျုံးစ်ဆိုတာက ပင်နယ်တီ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့ နောက်ခံကစားသမားတစ်ဦးပါ။မော်ရင်ညိုသူ့ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားက အရှေ့ကကန်သွင်းခဲ့တဲ့သူတွေအပြီး သူကန်သွင်းဖို့ လုပ်တည်းက ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ဆိုပြီးဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“When I saw [the penalties] going after the sixth, seventh [takers], I knew that we were going to be in trouble with Jones,” he said.
အသင်းရဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ လုဒ်ရှော ၊ မာတီရယ် ၊ ရှက်ဖို့ဒ် နဲ့ လင်ဂတ်တို့အတွက် ရာသီအစ ကာလတွေဟာ မလှပခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး မော်ရင်ညိုရဲ့အဓိက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်းတွေကိုပါ မော်ရင်ညို ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ကွှုးလယ်တိုက်စစ် ကစားတဲ့သူတစ်ဦးကို ခံစစ်လိုနေရာထားကစားမှတော့ ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ့်ကစားသမားဆိုတာ ခက်ရှားရှားပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ မော်ရင်ညို ဒီကစားမားတွေနဲ့ ပြန်လည်အဆင်ပြောအောင် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
“They’re lacking maturity,” he told Univision,aUS Spanish-language TV channel. “For example, Luke Shaw. When I got here two years ago, the boy didn’t even know how to compete. Great potential, yes, but he doesn’t know how to compete. And when we talk about Luke Shaw, about Martial, about Lingard, about Marcus Rashford, we’re talking about boys with great potential but who still are lacking –aword I can’t say but you like to sayalot – having that [courage]. They’re lackingabit of this.”
ဖရက်ဒ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေဖန်မှုဆိုရင် မော်ရင်ညို ရဲ့ စကားတွေမှာ ရှေ့နောက်မညီညွတ်မှုတွေရှိနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။မန်စီးတီးအသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒီဘရာဇီးလ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကို မော်ရင်ညို ကြားဖြတ်ပြီးအသင်းထံရအောင်ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့်လည်း ဖရက်ဒ်မှာ ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိဘူးဆိုတာကို မော်ရင်ညို ကောင်းကောင်းသိနေထားခဲ့ပြီးသားပါ။ဖရက်ဒ်ကို ခံစစ်အားသန်တဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ၀န်းရံကစားရင် အကောင်းဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်လို့ သူပြောကြားခဲ့ပြီး ဖရက်ဒ်က အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ခံစစ် ကစားဟန်ကို ပြောင်းလဲစေသူလို့ ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“I think Fred when the team is defensively stronger and doesn’t need in midfield people that are more worried in giving some balance to the team than being involved in creation and attacking dynamic, the day we are stronger defensively I think the horizons for Fred change completely.”
ဒီဂီယာတိုတာက အသင်းကို အပတ်စဉ်တိုင်း ကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သလို အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ကာလရှည်ရှိနေခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးပါ။ဒါပေမယ့် မော်ရင်ညိုဆီကနေ ဒီဂီယာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချီးကျူးစကားကြားရတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ရှားပါးပါတယ်။ယန်းဘွိုင်းစ် အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကို မော်ရင်ညို ချီးကျူးခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ သူအကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
“ I think David performance [against Young Boys] you have to say for 92 minutes, to be David there or myself would be the same.
“ I can kick as well as him and zero saves, zero shots, to be David or myself would be the same.”
မော်ရင်ညို နဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ ပြဿနာတွေမှာ ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကို အဖြေထုတ်ရတာ တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်။သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာကို ဘယ်တော့မှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။မော်ရင်ညို တစ်ရာသီလုံးပေါ့ဘာကို လူသိရှင်ကြားဝေဖန်မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သလို လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလည်း ကစားသမားနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရာသီအစမှာ ပေါ့ဘာကို မော်ရင်ညိုအသင်းရဲ့ ဒုတိယအသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်ကစားသမားမှ မရှိဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မော်ရင်ညိဆြိုတာက မော်ဒန်ဘောလုံးလောကရဲႚ နာမည်ကေဵာ် နည်ူးပတစ်ဦူးဖစ်ပေမယ့် သူရဲႚေူပာဆိုတဲ့ စကားတြေ နဲႛ အူပအြမူတေကြ မုကာခဏဆိုသလို ဝေဖန်ခံနေရတဲ့နည်ူးပတစ်ဦးလည်ူးဖစ်ပၝတယ်။ခဵဲလ်ဆီး ၊ ရီးရဲလ် ၊ မန်ခဵက်စတာ ယိူုိံက်တက်အသင်းတေမြာ အသင်းတေရြဲႚ အဓိက ကစားသမားတေနြဲႛ မုကာခဏဆိုသလို မော်ရင်ညြိ အခဵင်းမဵားခဲ့္ဘပီး ဒီကစားသမားတေကြို လူသိရငြ်ုကားကို ဝေဖန်ခဲ့တဲူ့ဖစ်ရပ်တေရြိနေပၝတယ်။
ပထမဆုံူးဖစ်ရပ်ကတော့ မန်ခဵက်စတာ ယိူုိံက်တက်အသင်းနဲႛ ဒၝဘီကောင်တီအသင်းတိုႛ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်မြာ ပင်နယ်တီကန်သငြ်းခဲ့တဲ့ နောက်ခံကစားသမား ဖီးလ်ဂဵြံးစ်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး မော်ရင်ညြိ ဝေဖန်ခဲ့တဲူ့ဖစ်ရပ်ပၝ။ပုံမန်ြပြဲခဵိန်အတငြ်းမြာ သရေရလဒ်ထက်ြပေၞနေခဲ့လိုႛ ပင်နယ်တီအဆုံးအူဖတ်ကန်သငြ်းရာမြာ တစ်ဖက်ကို (၈) ဋ္ဌကိမ်ထိ ကန်သငြ်းခဲ့ရ္ဘပီး နောက်ဆုံးကန်သငြ်းခဲ့တဲ့ ဖီးလ်ဂဵြံးစ်ရဲႚ ပင်နယ်တီ လြဲခေဵာ်ခဲ့လိုႛ မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်း္ဘပိင်ြပြဲကနေ ထက်ြခြာခဲ့ရပၝတယ်။ဖီးလ်ဂဵြံးစ်ဆိုတာက ပင်နယ်တီ ကဵမြ်းကဵင်သူတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့ နောက်ခံကစားသမားတစ်ဦးပၝ။မော်ရင်ညိသြူႛကိုေူပာုကားခဲ့တဲ့ စကားက အရြေႚကကန်သငြ်းခဲ့တဲ့သူတေအ္ဘြပီး သူကန်သငြ်းဖိုႛ လုပ်တည်းကူင်္ပံနာတစ်ခုခုတောူ့ဖစ်တော့မယ်လိုႛ ထင်မိပၝတယ် ဆ္ဘိုပီးဝေဖန်ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။
အသင်းရဲႚ လူငယ်ကစားသမားတြေူဖစ်တဲ့ လုဒ်ရြော ၊ မာတီရယ် ၊ ရက်ြဖိုႛဒ် နဲႛ လင်ဂတ်တိုႛအတကြ် ရာသီအစ ကာလတေဟြာ မလပြခဲ့ဘူးလိုႛ ဆိုရမြာူဖစ်္ဘပီး မော်ရင်ညိရြဲႚအဓိက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မတြေနြဲႛ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပၝတယ်။ကစားသမားတေရြဲႚ စမြ်းဆောင်ရည်ပိုင်း နဲႛ ပုဂ္ဂိလ်ြရေးပိုင်းတေကြိုပၝ မော်ရင်ညြိ ဝေဖန်ခဲ့တာပၝ။ကြ်းလယ်တိုက်စစ် ကစားတဲ့သူတစ်ဦးကို ခံစစ်လိုနေရာထားကစားမတြော့ေူခစမြ်ူးပိုံင်မယ့်ကစားသမားဆိုတာ ခက်ရြားရြားပၝ။နောက်ဆုံးမြာတော့ မော်ရင်ညြိ ဒီကစားမားတေနြဲႛူပန်လည်အဆင်ေူပာအောင်ူပလြုပ်ခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုရပၝမယ်။
ဖရက်ဒ် နဲႛ ပတ်သက်တဲ့ ဝေဖန်မဆြိုရင် မော်ရင်ညြိ ရဲႚ စကားတေမြာ ရြေႚနောက်မညီညတ်ြမတြေရြိနေတာကိုမင်တြေႚရမြာပၝ။မန်စီးတီးအသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒီဘရာဇီးလ်ကငြ်းလယ်ကစားသမားကို မော်ရင်ညြိုကာူးဖတ်္ဘပီးအသင်းထံရအောင်ကို ခေၞယူခဲ့ပၝတယ်။ဒီလိုခေၞယူခဲ့ပေမယ့်လည်း ဖရက်ဒ်မြာ ခံစစ်ပိုင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကောင်းမန်ြတဲ့ စမြ်းဆောင်ရည်မရြိဘူးဆိုတာကို မော်ရင်ညြိ ကောင်းကောင်းသိနေထားခဲ့္ဘပီးသားပၝ။ဖရက်ဒ်ကို ခံစစ်အားသန်တဲ့ ကစားသမားတေနြဲႛ ဝန်းရံကစားရင် အကောင်းဆုံးသူတစ်ဦူးဖစ်လာမယ်လိုႛ သူေူပာုကားခဲ့္ဘပီး ဖရက်ဒ်က အသင်းရဲႚကငြ်းလယ်ခံစစ် ကစားဟန်ကိုေူပာင်းလဲစေသူလိုႛ ဝေဖန်ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။
ဒီဂီယာတိုတာက အသင်းကို အပတ်စဉ်တိုင်း ကာကယ်ြပေးနေတဲ့သူတစ်ဦူးဖစ်သလို အသင်းရဲႚအကောင်းဆုံးကစားသမားအူဖစ် ကာလရည်ြရြိနေခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးပၝ။ဒၝပေမယ့် မော်ရင်ညိဆြီကနေ ဒီဂီယာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ခဵီးကဵြးစကာုးကားရတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ရြားပၝးပၝတယ်။ယန်းဘိငြ်းစ် အသင်းနဲႛ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်မြာဆိုရင် အသင်းအတက်ြအရေးပၝတဲ့ ကာကယ်ြမတြစ်ခုကိုပလြုပ်ပေိးိုံင်ခဲ့တာကို မော်ရင်ညြိ ခဵီးကဵြးခဲ့ပေမယ့်္ဘပိင်ြပြဲရဲႚမတ်ြတမ်းတေအြရ သူအကောင်းဆုံး စမြ်းဆောင်ိုံင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလိုႛ ဝေဖန်ခဲ့ပၝတယ်။
မော်ရင်ညြိ နဲႛ ပေၝ့ဘာရဲႚူင်္ပံနာတေမြာ ဘယ်သူမန်ြတယ် ဘယ်သူမြားတယ်ဆိုတာကို အေူဖထုတ်ရတာ တကယ့်ကိုခက်ခဲပၝတယ်။သေခဵာတာတစ်ခုကတော့ သူတိုႛိံစ်ြယောက်တြ္ဘဲပီးအလုပ်လုပ်တာကို ဘယ်တော့မြာူမင်တြေႚရတော့မြာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပၝပဲ။မော်ရင်ညြိ တစ်ရာသီလုံးပေၝ့ဘာကို လူသိရငြ်ုကားဝေဖန်မတြေ အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ်ူပလြုပ်ခဲ့သလို လေ့ကဵင့်ရေးကငြ်းမြာလည်း ကစားသမားနႛဲႛ အဆင်မေူပမတြေရြိနေပၝတယ်။ရာသီအစမြာ ပေၝ့ဘာကို မော်ရင်ညိအြသင်းရဲႚ ဒုတိယအသင်းခေၝင်းဆောင်အူဖစ် ခန်ႛအပ်ခဲ့ပေမယ့် မုကာခင်မြာပဲ ဆုံူးဖတ်ခဵက်ကိုပန်ူပင်ခဲ့္ဘပီး အသင်းရဲႚ အထက်မြာ ဘယ်ကစားသမားမြ မရြိဘူးလိုႛ ဆိုခဲ့ပၝတယ်။
Home Football Premier League စပါးအသင်းမှာကော မော်ရင်ညို ဘယ်သူတွေကို ဝေဖန်ဦးမလဲ